China Ejiri Ogwe Ọdụ Ụgbọala Erugoro China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ejiri Ogwe Ọdụ Ụgbọala Erugoro - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ejiri Ogwe Ọdụ Ụgbọala Erugoro)
200W N'èzí Led Square Oghere Light Ndị isi
Ejiri DLC kwadoro n'èzí n'èzí n'èzí -na ọrụ Photovoltaic site na mgbede ruo ụtụtụ. The ìhè Dugara osisi Light ndi isi na-akpaghị aka na-agbanyụrịrị na abalị ọkụ na-akpaghị aka na-tụgharịa na, nke na-eji obere ume ka ego. Nke a na-eme ka ogwe osisi Lotus 200W bụ mita 5000k dị elu na elu 26,000LM lumens, IP...
Ìhè Ihu Igwe Ọdụdọ 300w 600w 5 Akwụkwọ ikike afọ
Ìhè Igwe Ọdụdọ A Led 600w nwere ọnụọgụgụ 78,000lumens. Ìhè Ikpu Ozo nke Ugha 300w dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Igwe Ọkụ a Led 90w bụ IP65 ma chebe ya ka mmụba mmiri. Site na iji ọkụ mmiri 90w...
200W Igwe Ọdụdọ Ìhè na-ebu Plug 24000lm
Ìhè nke Igwe mmiri anyị na Plug 200w nwere ike ime ka ihe dị ọhụụ ruo 24000lm. Ìhè Na-eweta Ọkụ Egbu Ala bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Anyị jiri mgbanaka oriọna dị elu dị ka isi iyi nke ìhè maka anyị Singip Light Philips . Igwe a na –eme ka eriri ịgbatị ya na ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe na...
Ejiri Mmiri Iju Mmiri nke Egwurugwu 1200W 1560000LM
Igwe Mmiri mmiri a dị na 1200W nwere ọnụ ọgụgụ 1560,000lumens. Ìhè Iju Mmiri ahụ maka Egwuregwu dị mma maka ịmalite nnukwu ámá egwuregwu, ebe egwuregwu na egwuregwu dịka ụlọikpe basketball, ụlọ tennis na ogige bọl. Nke a na nnukwu Iju Mmiri maka Stadium bụ IP65 ma chebe ka e ghara imikpu mmiri. Ihe a na-eme nke ọma...
Ejiri ọkụ kpụ ọkụ n'ọnụ Led 150w 5000k
Ọnyà anyị n'okpuru ọkụ ọkụ 150w bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a dị 12x12 Ejiri Ìhè dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Obere Uhie Led Square nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka nhọrọ. Ebube ndị anyị na- eburu maka ọkụ ụgbọ ala bụ slim design slim...
Ejiri ihe ndị dị na kpụ ọkụ n'ọnụ 150W 18000LM
Anyị na-ekpuchi ọkụ na-enwu enwu bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a nwere ike ịgbanye ọkụ ọkụ 150w dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Okwunigwe ndị a na-ahụ maka ebe obibi Home Depot nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka nhọrọ. Ihe ndị anyị na- eme na-edu anyị...
Ejiri ọkụ ọkụ na-ekpuchi ọkụ na-ekpuchi 150W
Igwe ihe ntụgharị anyị na- agba gburugburu bụ IP65, nke a kwadebere maka ọdụ gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a na-enye ìhè ọkụ na-ekpuchi ọkụ 150w dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Ikike Mgbachi nke Aghaghachị nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka nhọrọ. Ebube anyị kpuchiri mkpuchi bụ slim...
Ejiri elu-igwe na-acha ọkụ ọkụ 150W 5000K
Ihe dị 150W Led High Light Light Australia bụ 130lm / w na 19500 lumens. Ogologo mmiri nke iri na ise na iri ise na ise bụ High Bay nwere ike dochie 400W HPS MH HID. The 150w Led High Bay Lighting Uk bụ CE ROHS mma. A na-eji akwa akwa anyị na- ehichapụ ọkụ ọkụ maka ime ụlọ na n'èzí. Nke a na- enye ọkụ ọkụ...
Ejiri Ufo High Bay Light 200W 4000K
Ufo High Bay 200w bụ 26,000 lumens na 130lm / w. Nke a Ufo High Bay 200w bụ DOB na-enweghị onye ọkwọ ụgbọ ala. Ufo High Bay Light ájá dị nro na-eguzogide ọgwụ na-ehicha ma ọ bụ nkwụsị ihe nhicha na-ehicha. Anyị ada oke mmiri ìhè hs koodu bụ 9405409000. Nke a na- enwu ọkụ na-ere ọkụ na Philippines eji maka ebe a...
Ejiri Ufo High Bay Fixture 100w 13000lm
Anyị Ude High Bay 100w na- anapụta ihe ịrịba 13000 lumens. Na-ere ọkụ n'oge ìhè 5000K, nke a Ufo Led High Bay Light Nyocha mee ka mmepụta ihe oriri na ihe ọṅụṅụ ọ bụla na-arụ, ọrụ ugbo na ụlọ ọrụ ugbo, ụlọ ahịa ahịa na ihe ndị ọzọ! 100w Ufo Led Fixture ájá dị nro na-eguzogide ọgwụ na-ehicha ma ọ bụ nkwụsị ihe...
Ejiri okporo ụzọ anyanwụ dị elu 40 Watt 4400lm
Ogologo Anyanwu Mmiri 40 nke Watt bụ ihe ngwọta kachasị mma maka mkpa nchekwa ọkụ dịpụrụ adịpụ. Nke a bụ ìhè anyanwụ anyanwụ 40w na-enye ọkụ ọkụ ọkụ 40W nke na-enwu ọkụ ọkụ na-adọba ụgbọala. Eluigwe dị na mbara igwe dị elu 40w nwere otu oghere nke dị na mbara igwe nke wuru na batrị lithium na usoro nchịkwaghachi...
50W N'èzí Anyanwụ Street Ìhè na Ogwe 5000K
Umu Ala Uhie nke Umu Ala Umu Uzo 50w bu ihe nghota kacha mma maka mkpa nchekwa nchekwa di n'ime. Okporo ụzọ ìhè anyanwụ a na-eji maka ebe a na-adọba ụgbọala, n'okporo ámá, okporo ụzọ na ụzọ dị elu. Ụzọ 50w na-enwu gbaa maka ire ere nwere otu oghere nke dị na mbara igwe nke wuru na batrị lithium na usoro...
240W Ogwe ụgbọala ụgbọala na-adọba ụgbọala ọkụ ọkụ 4000k
Ụlọ ọrụ mpempe ụgbọala nke ụgbọala anyị 240W bụ 130lm / w na 31200lm na nke 300w nke ụgbọala mpempe ụgbọala nke ụgbọala nwere ike dochie HPS / HID 10 00 watt . Ụlọ Mpịnye Ogwe Uhie Mpempe ụgbọala bụ Ụdị mmiri 3M na IP65. Anyị bụ ndị na- adọba ụgbọala na-arụ ọrụ ntanetị ma obere oghere a na- adọba ụgbọala dị nnọọ egwu....
200W Ogwe Ọdụ Ụgbọ Mpempe Ogwe Ọdụ Ụgbọ Mmiri
Ejiri Plight Na-agbanwe 200W bụ 26000 lumen mmepụta na ọtụtụ ugboro na-enwu gbaa karịa ìhè ọdịnala. Mwube Iju Mmiri a nke ụgbọala a 200w nwere ike dochie 700 watt HPS / HID. Ogwe Ọdụ Ụgbọ Epeepe Na-adọba ụgbọala nwere ọla kọpa ma ọ bụ agba ojii na ihe ntanetị ọkụ na-egbuke egbuke ejiri ya mee ihe maka ebe a na-adọba...
Mfe Mfe 100W Ogwe Ọdụ Ụgbọ Mmiri nke Ogwe Ọdụ Ụgbọ Mmiri Light Fixtures
Nke a 100w na-adọba ụgbọala ọkụ Light Fixtures jiri akwa na-eme ka onye ọkwọ ụgbọala na ọkwọ ụgbọala na-enweghị mmiri na-eme ihe n'èzí. Ụlọ Elu Ọdụ Ụgbọ Mmiri Anyị dị ihe dị ka mita 3-5. Ụlọ ọrụ nkwụnye ọkụ nke ebe a na- adọba ụgbọala nke ụgbọala a na- akwụ ụgwọ ma na- arụ ọrụ nkwụnye ụgbọala na -akwụ ụgwọ. The...
Agba agba nke agba 150 Ejiri ụgbọ oloko
The 150 Watt Led Parking Lot Light nwere nnukwu lumen mmepụta 19500lm. Nke a bụ 150 Light Led Light Light nwere ike dochie 400 watt HPS / HID. Anyị Amazon na-echekwa ụgbọala Lot Ìhè bụ Ụdị 3M na IP65. Igwe ihe mkpuchi nke ebe a na- adọba ụgbọala bụ ihe mmetụta sensọ foto na ihe ọkụkụ na-adọba ụgbọala n'èzí ga-eme...
Ejiri Ogwe Ọdụ Ụgbọala Erugoro Ebe Ogwe Ọdụ Ụgbọaka Ejiri Ogwe Ndị E Ji Ogwe Ọdụ Ụgbọ Mmiri Egwuregwu Ọdụ Ụgbọ Osimiri 100w Ogwe Ọdụ Ụgbọ Mmiri Lot Light 100W Ogwe n'ọdụ ụgbọ elu Ogwe Ọdụm Ogwe Mpempe ụgbọala maka Ogwe Oghere Mpaghara Mpempe Ọdụ Ụgbọala 30W